Fsociety: fonosana fitaovana fanapahana | | Avy amin'ny Linux
Fsociety: fonosana fitaovana hacking tena tsara
Tsy tsiambaratelo ho an'iza na iza hatramin'ny nisian'ny Andriamatoa Robot: andiana Geek izay tsy tianao halaina Ny fitomboan'ny fahalianana amin'ny hacking dia nitombo haingana, izahay koa dia nahita faniriana lehibe amin'ny fampiasana distro toy ny Kali Linux ary olona maro koa no tonga amintsika mitady fitaovana hacking.
Ity revolisiona rehetra manodidina ny filaminan'ny solosaina ity, ny heloka bevava amin'ny cyber, ny fanapahana etika etika ary ny hafa, dia namorona suite-rindrambaiko vaovao ary koa ny atiny vaovao, tamin'ity fotoana ity dia gaga izahay fa misy suite antsoina hoe Fsociety Fitaovana fanapahana entana fonosana ireo vondrona ireo ny rindranasa rehetra ampiasaina amin'ny Mr Robot ary mameno azy ireo andiany hafa amin'ny fampiharana hacking.
1 Inona no fonosana Fifiety Fitaovana Fitaovana?
2 Ahoana ny fametrahana fonosana Fifiety Fitaovana Tools?
Inona no fonosana Fifiety Fitaovana Fitaovana?
Izy io dia fonosana fitaovana ho an'ny hacking multiplatform sy loharano misokatra, izay mivondrona andiana baiko sy fampiharana mifandraika amin'ny fiarovana ny solosaina sy ny fanapahana, manana ny maha izy azy manokana fa azo antoka fa misy ireo fampiharana ampiasain'ny andian-dahatsoratra malaza Mr. Robot
Ity rafitra mandroso ity dia ahafahantsika manao fitsapana fidirana ary tonga miaraka amina fampiharana izay mikendry ny hanangona vaovao, hahita teny miafina, hanao fitsapana tsy misy tariby, hitrandrahana ny fahalemena, hanafika ireo rindrambaiko ho an'ny daholobe sy tsy miankina, hanao fanararaotana, ary koa hampihatra ny Sniffing sy Spoofing.
Misy rindranasa maherin'ny 50 izay azo apetraka ho azy amin'ny distro Linux, ny tanjon'ny Fsociety Hacking Tools Pack dia ny hanome fotodrafitrasa hanombohana amin'ny fanapahana hack ary avy eo, hananganana fitaovana nohavaozina manodidina ny filaminan'ny solosaina. Azo jerena ny antsipirian'ny fitaovana tsirairay mandrafitra ity fonosana ity Eto.
Ahoana ny fametrahana fonosana Fifiety Fitaovana Tools?
Ny fametrahana an'ity fonosana fitaovana hacking ity dia tsotra be (Azontsika ampiasaina mihitsy aza ireo fitaovana nefa tsy mametraka fotsiny amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny fampiharana python an'ny suite), ny dingana hametrahana na hanavaozana ireo rindranasa ao amin'ny distro anay dia ireto manaraka ireto:
Sokafy ny terminal ary araho ireto baiko manaraka ireto:
Ity dia hihazakazaka ny Fsociety Menu avy amin'ny terminal, izay ahafahanao mitsapa ireo rindranasa mandrafitra azy na mametaka na manavao ireo fonosana fitaovam-pandrafetana rehetra. Amin'ny tranga fametrahana dia misafidy safidy 0 fotsiny isika, avy eo misafidy sy mankafy ny andiana fampiharana.
Horonantsary manazava tsara momba an'ity fitaovana ity sy ny fampiasana azy dia azo jerena etsy ambany:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Fsociety: fonosana fitaovana hacking tena tsara
JuKaMe dia hoy izy:
Salama, tsara, tsara, azafady fa tsy avelako hametraka.
Ny programa "git" dia tsy apetraka. Azonao atao ny mametraka azy amin'ny fanoratana:
sudo apt apetraka git
bash: cd: fsociety: Tsy misy ilay rakitra na lahatahiry
jukame @ jukame-Satellite-A305D: ~ $ sudo apt apetraho clone git https://github.com/Manisso/fsociety.git
tenimiafina [sudo] ho an'ny jukame:
Lisitry ny fonosana mamaky ... Vita
Mamorona hazo fiankinan-doha
Famakiana ny mombamomba ny satan ... Vita
E: Tsy hita ilay fonosana clone
E: Tsy hita ilay fonosana https://github.com/Manisso
E: Tsy nahita fonosana mampiasa "*" miaraka amin'ny "https://github.com/Manisso"
E: Tsy misy fonosana hita miaraka amin'ny fomba fiteny mahazatra "https://github.com/Manisso"
Valio amin'i JuKaMe
dicuzew dia hoy izy:
Ny zavatra mahatsikaiky dia ny terminal mitovy no milaza aminao in-2 ny zavatra tokony hosoratanao LOL
Mamaly an'i dicuzew
Waflessnet dia hoy izy:
Tsy mino an'izany aho. Inona no hataon'ny tovolahy toy izany amin'ny bilaogy toa izao?
Valiny amin'ny Waflessnet
CryptoBoy dia hoy izy:
fametrahana tsotra amin'ny linux rehetra, lahasa lehibe SORATRA ho an'ny linuxer ... Toa hitako fa ianao dia iray amin'ireo nametraka linux satria tena mpijirika izy ireo, ary bebe kokoa amin'ny git, zavatra tena ifotony sy ifotony ho an'ny olona miangona izay tokony hahafantatra ergo fampandrosoana ihany koa, tsy maintsy fantatrao git ...
Valiny amin'ny CryptoBoy
Tena matotra ve? xD
Mihoatra ny fahasoavan'Andriamatoa Robot sy ilay script kiddie vibe ananana, mampientanentana ilay script raha tsy hiteny afa-tsy izay.
Tsy fanasitranana fotsiny fa mampidi-doza tokoa, fa misintona kaody avy amin'ny tranokala marobe, anisan'izany ny pastebins sasany, raha toa ka mametraka script mametaveta izy ireo rehefa mampiasa fsociety dia mihinana azy ianao. Tsy mandeha lavitra:
Iza no mifehy an'ity pastebin ity? Ahoana no ahafantarantsika fa ny famonoana ho an'ny fiarahamonina manaraka dia tsy hanana kaody mametaka zavatra maloto?
Heveriko fa tsy tompon'andraikitra ny fampiasana na manao dokam-barotra an'ity tahiry ity.
Ny zavatra pastebin dia averimberina matetika ... ary tena goavambe izany hoy ianao.
Ity tetikasa ity dia tsy inona fa ny asan'ny mpankafy ny andian-dahatsoratra, amin'ny maha-fansub, fa izay ahitanao fa "facade" ny zava-drehetra. Izy io dia manome ny rivotra-hacker andian-dahatsoratra, manonta ny lohateny amin'ny console amin'ny fomba manaitra, sns. Saingy ao ambadik'izany, misy lesoka amin'ny tsipelina ao amin'ny kaody (sy ny fampifangaroana ny tenin-drazan'ny developer amin'ny teny anglisy), kaody tsy dia voarindra, miverimberina, fifehezana lesoka amin'ny fandehanana manodidina ny trano, sns.
Rehefa dinihina tokoa, izy ireo dia andiana fiasa izay voafetra amin'ny fanaovana os.system (adikao ary apetaho ny fomba fametrahana ny loharano X).
Avy eo ny zavatra azontsika jerena ho loharano manokana (tsy misy fametrahana kilasika toy ny nmap) dia fanamarinana plugins wordpress efatra tsy mitombina.
Avy eo ianao dia manana fanamarinana toy ny url + "/ administrator" hijerena raha toa ka nametraka Joomla ny tranokala (toy ny hoe tokana amin'i Joomla sy / na tsy azo ovaina) na tranokala + '/wp-login.php' hijerena WordPress. Izy ireo no fanamarinana mahazatra azonao atao amin'ny maso, fa miankina amin'ny fepetra sasany fa tsy valiny azo antoka.
Fa hey, tsy mila masiaka koa ianao. Mbola mpandefa fampiharana io. Mazava ho azy, tsy mandinika ny fampiasana ny proxy izany fanaovana izany haha.
Ny olana amin'izany dia ny ahitanao ny olona toa an'i JuKaMe, izay tsy mahay mametraka ny git (na miaiky ny tsy fahombiazana), fa te hampiasa hacktool. Azo antoka fa raha ny aminao dia resaka ianarana izany, fa raha izany dia ho 1%, ny 99% ambiny, dia hiezaka izy ireo ny hahita izay azon'izy ireo hack / iroahana amin'ity fampiharana "majika" ity.
Araka ny nolazaiko tamin'ny hevitra nataoko teo aloha, script kiddies.
Hanombohana dia hoy izy:
Kiddies script na asshole, mampiasa teny nentim-paharazana sy mamaritra kokoa.
Mino izay rehetra hitako amin'ny fahitalavitra aho. Na izany na tsy izany.
Valiny amin'ny Starter
Nandoko ny script tamin'ny github-ko aho, namboariko izy mba hijerena tsara hoe inona izany, nataoko saka izy hanaraha-maso kaody ho an'ny docker, .py, isntall, noheveriko tany am-boalohany fa zavatra vonona ho an'ny script kiddies izany ary manomboka mihomehy ny «Kali kuakers »izay mangataka fanampiana aza amin'ny fametrahana kali, mampiharihary ny tsy fahaizan'izy ireo fahalalana toy izany amin'ny linux, nefa hita fa tsy izany, script tsotra be fotsiny miaraka amin'ny zavakanto Holland mba hampisehoana fa milay izay mampandeha ny fampidinana ireo programa (Fametrahana apt-get madio) ary ny sasany fiaviany tena mampiahiahy, amin'ny andavan'andro ampiasako ohatra ny nmap hijerena tambajotra (miasa miaraka amin'ny linux amin'ny tontolon'ny data) aho ary tapaka ao anatin'ny script maloto, tsy mamokatra misy fampahalalana ary tsy mahomby foana izy, vita tsara ny script tsy eo, ny asa dia matetika misarika ratsy miaraka amin'ity script ity, tsotra dia tsotra ary tapaka raha tsy izany.
Maikel rivas dia hoy izy:
sudo apt-mahazo mametraka git
Manoro hevitra ny hametraka aptitude aho
sudo apt-mahazo mametraka aptitude
sudo aptitude fikarohana git (jereo raha voatanisa ny git)
sudo aptitude apetraka git
Valiny tamin'i Maikel Rivas
Miguel Angel Obando Lancho dia hoy izy:
Mahazo hafatra diso aho rehefa manatanteraka jsociety
File "/usr/share/doc/fsociety/fsociety.py", tsipika 529
afa-tsy (), hafatra:
SyntaxError: syntax tsy mety
Mamaly an'i miguel angel obando lancho
AnonMr dia hoy izy:
Salama maraina, mety hatsipiko aminao io bibikely io satria tsy maintsy ataonao amin'ny maha python2 azy ity.
Manantena aho fa hamaha ny fisalasalanao ianao.
Mamaly an'i AnonMr
pia dia hoy izy:
lol, voalohany indrindra, ny hevitra voalohany dia ireo mpampiasa tsy ampiasain'ny zploid.net, aleoko miaiky fa izaho noov izay tsy nanandrana linux mihitsy, satria tsy manana solosaina mifandimby izy, manana loharano tsara ary mety hitera-doza aho izao tontolo izao. Andao, VPN maimaim-poana tsy ny zava-drehetra xd.
Mamaly an'i pía
Salama, salama maraina, tsy haiko raha fantatrao fa afaka mametraka backtrack ianao na izao Kali Linux amin'ny memozy USB rehetra ary mampandeha azy io, atombohy ny OS avy amin'ny BIOS ary tsy mila mampiasa habaka kapila mafy ianao, raha toa ka lazainao fa manana solosaina voalohany fotsiny ianao Ataoko fa tsy te hanimba azy ianao.
Kali na misy distro Linux dia mandeha haingana be amin'ny solosaina tsy dia mahomby ary amin'ny ankapobeny amin'ny solosaina rehetra
Miarahaba anao, AnonMr. Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara. Nametraka Fsociety tamin'ny kinovako manokana an'ny Distro MX Linux izay velona sy azo ampidirina ihany koa aho, noho izany, afaka mampiasa FSocsociety na fampiharana hafa avy amin'ny kapila USB misy fikirizana na tsia.
Elliot dia hoy izy:
Fantatro fa tsy misy dikany ny fanontaniako saingy tena azo hacked avy amin'ity fitaovana ity ve sa fitsapana fotsiny?
Valiny tamin'i Elliot
DaniPichaCorta dia hoy izy:
Tsy misy mahatafintohina na iza na iza, fa ireo olona mitsikera an'ity script ity, azonao atao ve ny mamoaka kinova hafa vita tsara? Raha nanana ny fahalalanao aho dia hanana, saingy tsy tonga hatreto.
Mamaly an'i DaniPichaCorta
Lasa manam-pahaizana momba ny fanapahana sy ny cyber
gydl: Fandraisana an-tsary ho an'ny youtube-dl